ကြိုးစားနေပေမယ့် အလွဲတွေကြုံနေရတဲ့ အောင်မြင့်မြတ်
နောက်ထပ်ဇာတ်ကားတွေထပ်ရိုက်ဖို့ကြိုးစားနေပေမယ့် အလွဲတွေကြုံနေရတဲ့ အောင်မြင့်မြတ်
25 May 2018 . 2:57 PM
နောက်ထပ်ဇာတ်ကားတွေ မရိုက်တော့ဘူးလားလို့မေးလာ သူတွေကို သရုပ်ဆောင်အောင်မြင့်မြတ်ကသူကြုံတွေ့နေရတဲ့ အခက်အခဲတွေနဲ့ပတ်သက်လို့ လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာ အခုလိုရေးသားထားတာတွေ့ရပါတယ်။
“ကျွန်တော့်ကို နောက်ကားတွေမရိုက်သေးဘူးလားဆိုပြီး မေးမေးနေကြလို့ပါ…။
နောက်ထပ်ရုပ်ရှင်ကားကြီးတစ်ကားရိုက်ဖို့ ၇၀ရာခိုင်နှုန်းလောက်သေချာနေပြီဆိုတဲ့အကြောင်းအင်တာဗျူးတွေမှာလဲ ကျတော်ဖြေခဲ့ပါတယ်..။
အဲ့ Film အတွက် အစက Production ဘက်က ကှမ်းလှမ်းတုန်းက Character တစ်ခုပါ.. နောက်တစ်ပတ်လောက်ကြာတော့ အဲ့နေရာမဟုတ်ပဲ သူတို့ Character မှားပြောတာပါဆိုပြီး နောက်တစ်နေရာပြောင်းသွားပါတယ်…။
ကျွန်တော်နဲ့အဆင်မပြေဘူးထင်လို့ ငြင်းခဲ့ပါတယ်.. ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်နဲ့မှအဆင်ပြေမှာပါဆိုပြီး ထပ်ကမ်းလှမ်းလို့ ဒါရိုက်တာကော တာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ပါတွေ့ပြီး ရိုက်ဖို့သဘောတူခဲ့တာပါ..။
တစ်လလောက်တောင်ကျွန်တော် ဇာတ်တွေဖတ် ပြီးအဝတ်အစားကအစ သေချာစဉ်းစားခဲ့ပါတယ်.. ပြီးတော့ အဲ့ဇာတ်ကားကိုသေချာလုပ်ချင်လို့ Series တစ်ခု နဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကြီးတစ်ခုတောင် မရိုက်ပဲ ဒီကားအတွက်ပဲ သေချာအချိန်ပေးဖို့လုပ်ခဲ့တာပါ…။
ဒီ မှာကျွန်တော်ပြောချင်တာက ကျွန်တော်ဇာတ်ကားတွေ အများကြီးကျွန်တော်လက်ခံလိုက်ရင် ပေးချင်တာနဲ့ ပေးလိုက်တာ မတူတာတွေ ပရိတ်သတ်ဆီ အပြည့်အဝ မရောက်မှာစိုးတဲ့အတွက် ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် တခြားကားတွေကိုမရိုက်ခဲ့တာပါ.
ကျတော်ဟာဘာလုပ်လုပ် အဲ့အလုပ်ပေါ်မှာ Responsibility အပြည့်အဝ ယူချင်တဲ့အတွက် ကျွန်တော်သေချာပိုင်နိုင်မှ ကျွန်တော်လုပ်ပါတယ် ..။ ဒီ Film အတွက်လဲ ကျွန်တော် ကြားထဲမှာ Director နဲ့လဲ သေချာတွေ့ပြီး အဝတ်အစားတွေ Acting ပိုင်းတွေပါ ပြောဖြစ်ပါတယ်.. ။
ဥပါယ်တံမျဉ်ဇာတ်ကားမှာ သရုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ သူတို့နှစ်ယောက်
ဒါပေမယ့် မနေ့ကပဲ ဘုတ်အဖွဲ့က ကျွန်တော့်နေရာမှာတခြားလူတစ်ယောက်ကမ်းလှမ်းထားလို့ ကျွန်တော်နဲ့မရိုက်ဖြစ်တော့ကြောင်း ကြားလူက လှမ်းပြီးတောင်းပန်ပါတယ်…။
စိတ်တော့မဆုိးတော့ပါဘူး… ဒါပေမယ့် ကျွန်တော့်ရဲ့နောက်ထပ်ရုပ်ရှင်တွေကိုစောင့်နေကြတဲ့သူတွေအတွက် မရိုက်ဖြစ်တော့တဲ့အကြောင်းလေးလာပြောပြတာပါ…။
အဆိုတော်ကျားပေါက်ရဲ့ သီချင်း မှာလည်း ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့သေးတဲ့ အောင်မြင့်မြတ်
ဘယ်သူ့ကိုမှလဲစိတ်မဆိုးပါဘူး.. ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပဲ စိတ်ဆိုးပါတယ် ..
ဟုတ်ကဲ့ ဒါပါပဲ ..
ကျွန်တော့်ကို အချိန်တွေပေးပြီး ဇာတ်အတွက်သေချာ တိုင်တိုင်ပင်ပင်ရှိခဲ့တဲ့ Director နဲ့ တာဝန်ရှိသူတွေကိုလဲ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ..” ဆိုပြီးတော့ ဥပါယ်တံမျဉ် ဇာတ်ကားနဲ့ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ မင်းသားအောင်မြင့်မြတ်က အခုလိုရေးထားတာဖြစ်ပါတယ်။
Photo Credit: Aung Myint Myat Facebook ၊ Black Cat
နောကျထပျဇာတျကားတှထေပျရိုကျဖို့ကွိုးစားနပေမေယျ့ အလှဲတှကွေုံနရေတဲ့ အောငျမွငျ့မွတျ
နောကျထပျဇာတျကားတှေ မရိုကျတော့ဘူးလားလို့မေးလာ သူတှကေို သရုပျဆောငျအောငျမွငျ့မွတျကသူကွုံတှနေ့ရေတဲ့ အခကျအခဲတှနေဲ့ပတျသကျလို့ လူမှုကှနျရကျပျေါမှာ အခုလိုရေးသားထားတာတှရေ့ပါတယျ။
“ကြှနျတေျာ့ကို နောကျကားတှမေရိုကျသေးဘူးလားဆိုပွီး မေးမေးနကွေလို့ပါ…။
နောကျထပျရုပျရှငျကားကွီးတဈကားရိုကျဖို့ ၇၀ရာခိုငျနှုနျးလောကျသခြောနပွေီဆိုတဲ့အကွောငျးအငျတာဗြူးတှမှောလဲ ကတြျောဖွခေဲ့ပါတယျ..။
အဲ့ Film အတှကျ အစက Production ဘကျက ကှမျးလှမျးတုနျးက Character တဈခုပါ.. နောကျတဈပတျလောကျကွာတော့ အဲ့နရောမဟုတျပဲ သူတို့ Character မှားပွောတာပါဆိုပွီး နောကျတဈနရောပွောငျးသှားပါတယျ…။
ကြှနျတျောနဲ့အဆငျမပွဘေူးထငျလို့ ငွငျးခဲ့ပါတယျ.. ဒါပမေယျ့ကြှနျတျောနဲ့မှအဆငျပွမှောပါဆိုပွီး ထပျကမျးလှမျးလို့ ဒါရိုကျတာကော တာဝနျရှိသူတှနေဲ့ပါတှပွေီ့း ရိုကျဖို့သဘောတူခဲ့တာပါ..။
တဈလလောကျတောငျကြှနျတျော ဇာတျတှဖေတျ ပွီးအဝတျအစားကအစ သခြောစဉျးစားခဲ့ပါတယျ.. ပွီးတော့ အဲ့ဇာတျကားကိုသခြောလုပျခငျြလို့ Series တဈခု နဲ့ ရုပျရှငျကားကွီးတဈခုတောငျ မရိုကျပဲ ဒီကားအတှကျပဲ သခြောအခြိနျပေးဖို့လုပျခဲ့တာပါ…။
ဒီ မှာကြှနျတျောပွောခငျြတာက ကြှနျတျောဇာတျကားတှေ အမြားကွီးကြှနျတျောလကျခံလိုကျရငျ ပေးခငျြတာနဲ့ ပေးလိုကျတာ မတူတာတှေ ပရိတျသတျဆီ အပွညျ့အဝ မရောကျမှာစိုးတဲ့အတှကျ ကြှနျတျောကိုယျတိုငျ တခွားကားတှကေိုမရိုကျခဲ့တာပါ.
ကတြျောဟာဘာလုပျလုပျ အဲ့အလုပျပျေါမှာ Responsibility အပွညျ့အဝ ယူခငျြတဲ့အတှကျ ကြှနျတျောသခြောပိုငျနိုငျမှ ကြှနျတျောလုပျပါတယျ ..။ ဒီ Film အတှကျလဲ ကြှနျတျော ကွားထဲမှာ Director နဲ့လဲ သခောတြှပွေီ့း အဝတျအစားတှေ Acting ပိုငျးတှပေါ ပွောဖွဈပါတယျ.. ။
ဥပါယျတံမဉျြဇာတျကားမှာ သရုပျဆောငျခဲ့တဲ့ သူတို့နှဈယောကျ
ဒါပမေယျ့ မနကေ့ပဲ ဘုတျအဖှဲ့က ကြှနျတေျာ့နရောမှာတခွားလူတဈယောကျကမျးလှမျးထားလို့ ကြှနျတျောနဲ့မရိုကျဖွဈတော့ကွောငျး ကွားလူက လှမျးပွီးတောငျးပနျပါတယျ…။
စိတျတော့မဆုိးတော့ပါဘူး… ဒါပမေယျ့ ကြှနျတေျာ့ရဲ့နောကျထပျရုပျရှငျတှကေိုစောငျ့နကွေတဲ့သူတှအေတှကျ မရိုကျဖွဈတော့တဲ့အကွောငျးလေးလာပွောပွတာပါ…။
အဆိုတျောကြားပေါကျရဲ့ သီခငျြး မှာလညျး ပါဝငျသရုပျဆောငျခဲ့သေးတဲ့ အောငျမွငျ့မွတျ
ဘယျသူ့ကိုမှလဲစိတျမဆိုးပါဘူး.. ကိုယျ့ကိုယျကိုပဲ စိတျဆိုးပါတယျ ..
ဟုတျကဲ့ ဒါပါပဲ ..
ကြှနျတေျာ့ကို အခြိနျတှပေေးပွီး ဇာတျအတှကျသခြော တိုငျတိုငျပငျပငျရှိခဲ့တဲ့ Director နဲ့ တာဝနျရှိသူတှကေိုလဲ ကြေးဇူးတငျပါတယျ ..” ဆိုပွီးတော့ ဥပါယျတံမဉျြ ဇာတျကားနဲ့ အောငျမွငျခဲ့တဲ့ မငျးသားအောငျမွငျ့မွတျက အခုလိုရေးထားတာဖွဈပါတယျ။